Iimpawu zeHuawei Nova 4, | I-Androidsis
Besilinde ukufika kweHuawei Nova 4, iflegi elandelayo phakathi kwepremiyamu phakathi kuluhlu lomenzi waseAsia. Kwaye namhlanje, njengoko sasibhengezile ngelo xesha, ibeyintetho esemthethweni yesixhobo, ke ngoku sinokuqinisekisa konke I-Huawei Nova 4 amanqaku.
Sithetha ngesixhobo esinokuthi xa siveza sikwazi ukubona oko inokuma ngokuqaqanjelwa yikhamera kwisikrini sayo, ukunqanda inotshi ecaphukisayo kwiscreen esisetyenziswa sisininzi seetheminali. Kwaye ngoku sinokuqinisekisa ukuba phakathi kweempawu zeHuawei Nova 4 kwesi sikrini sinekhamera efakelweyo kwisitayile se-Samsung's Infinity-O.
Kwicandelo loyilo sifumana ifowuni enembonakalo efanayo neMbeko yeHloniphe 20. Kule nto, i-chassis yealuminium kunye neglasi enomsindo yeHuawei Nova 4 inika isixhobo ukubonakala kwepremiyamu, kunye nokubamba okumnandi ngokwenene.
1 Uyilo lweHuawei Nova 4
2 Iimpawu zeHuawei Nova 4
Uyilo lweHuawei Nova 4
Njengesiqhelo kwiimodeli zamva nje zebrendi, i-gradient ayinakuphulukana nale Huawei Nova 4 yokubonelela ngoyilo olwahlukileyo oluya kutsala onke amehlo. Ukulandela nge Uyilo lweHuawei Nova 4 yithi isixhobo sinendawo engaphambili ehlala ikakhulu kwiscreen, ngelixa ngasemva sifumana inkqubo yekhamera kathathu ecaleni kwesifundi sezixhobo zeminwe.
Sele kwicala lasekunene kulapho babeke khona iqhosha lokuvula nelokucima ifowuni, kunye namaqhosha amabini okulawula ivolumu yesixhobo. Lumka ke, ukongeza ekubeni nohlobo C lwe-USB kunye nesithethi emazantsi, sizisa iindaba ezimnandi kubasebenzisi be-audiophile: phakathi I-Huawei Nova 4 amanqaku I-3.5 mm jack ibandakanyiwe ukudibanisa ii-headphone.
Ngamafutshane, ifowuni enomtsalane ebonakalayo, nangona ingenalo naluphi na uhlobo lokumelana namanzi kuba kuye kwafuneka basike iinkcukacha kwenye indawo, yenza le setheminali ibe yimodeli entle kakhulu kwaye eyenza ukuba ibe yinto ebaluleke kakhulu ukuba ithathele ingqalelo. Uluhlu olukulo.
Iimpawu zeHuawei Nova 4
Ngokuphathelele I-Huawei Nova 4 amanqakuUkuthi ifowuni entsha yeHuawei ineempawu ezingcono kunezo zeHuawei P9, ethi okuninzi ngale premium ye-smartphone ekumgangatho ophakathi, eqinisekisa ukuba ungahambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kweengxaki ezinkulu.
Ukubalulwa kobugcisa iHuawei Nova 4
Umzekelo Nova 4
Inkqubo yokusebenza I-Android 9 ngonxibelelwano lwesiko EMUI 9
Isikrini 6.4 intshi - 2310 x 1080
Inkqubo Kirin 970
GPU IMali G72
Ukugcinwa kwangaphakathi I-128 iyandiswa ngamakhadi e-MicroSD
Ikhamera esemva 48MP + 16MP + 2MP / 20MP + 16MP + 2MP
Ikhamera yangaphambili I-megapixels ze-25
Conectividad I-Bluetooth 5.0-chip yeNFC
Ezinye izinto Isivamvo seFingerprint -Ukuvula ubuso
Ibhetri 3.750 mah
Ubukhulu ku miselwa
U bunzima ku miselwa
Ixabiso I-euro ezingama-450 / i-400 ze-euro
Njengoko ubona, iHuawei Nova 4 ibetha ngombulelo kwiprosesa yaseKirin 970 ethi, kunye neMali 72 GPU kunye ne Imemori ye-8 GB ye-RAM Esi sixhobo sinaso, siya kuba nakho ukubonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo okuya kusivumela ukuba sonwabe kuwo nawuphi na umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kweengxaki ezinkulu, nokuba bafuna umthwalo ongakanani na.
Kule nto kufuneka sidibanise I-3.750 mAh ibhetri eqinisekisa ukuzimela malunga neentsuku ezimbini ukuze ubenakho ukwenza okunokwenzeka kwiscreen sayo esikhulu. Kwaye yenye yezona zinto zinomdla zeHuawei Nova 4 esizibonayo kwipaneli yayo ye-6.4-intshi ene-Full HD + isisombululo ngenxa yombono we-19.5: 8 owenza esi siginali lukhetho olukhulu lokonwabela umxholo wemultimedia.
Yitsho ukuba iHuawei Nova 4, eya kuthi ifike nohlobo lwamva lwenkqubo yokusebenza kukaGoogle enkosi I-EMUI 9.0, Iya kuba nembonakalo ezimbini zekhamera; Imodeli eneevithamini ngakumbi ivula inkqubo yelensi ephindwe kathathu inee-megapixels ezingama-48 + 16 + 2, ngelixa uguqulelo olunefasifisi olungaphezulu luhlala kuma-20 + 16 + 2.
Ewe, zombini iimodeli zine Ikhamera engaphambili eyi-25 megapixel Oko kuyonwabisa abantu abazithandayo. Ngokumalunga nexabiso kunye nomhla wokumiliselwa kweHuawei Nova 4, iya kufika e-China ngexabiso le-euro ezingama-450 ngohlobo olupheleleyo kunye ne-400 ye-euro ukutshintsha imodeli ngeyona khamera imbi kakhulu. Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngeempawu zeHuawei Nova 4?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Le yiHuawei Nova 4 enekhamera efakwe kwiscreen
Yintoni i-WiFi 6? Zeziphi iingenelo esinazo?